यी २३ वर्षीया महिला जसले गरिन कसैले सोच्नै नसक्ने काम ! – Ramailo Sandesh
भनिन्छ महिला घरको लक्ष्मी हुन् तर त्यही लक्ष्मीले यस्तो कार्य गरेपछि के हुन्छ ? त्यस्तै भएको यहाँ भारतमा बझाङ घर भएकी एक महिला गहनासहित फरार भएकी छन्। भारतको बेङ्गलोरबाट बस्दै आएकी २३ वर्षीया गिता थापा (खड्का) फरार भएकी हुन्।
त्यस्तै, केही दिन अघिको बेमौसमी वर्षाले गर्दा ठाउँठाउँमा आएको पहिरोले सडक अवरुद्ध भएपछि भीमदत्त नगरपालिका–९ खल्ला मुसेट्टीका बासिन्दालाई आवतजवत गर्न निकै अप्ठ्यारो परेको छ । सडक अबरुद्ध भएपछि पैदल हिँडनसमेत यस क्षेत्रका बासिन्दालाई असहज भएको हो ।
पहिरोको माटो, ढुङ्गा सडकमा थुप्रिँदा जोखिम मोलेर स्थानीय बासिन्दा आवतजावत गर्दै आएका छन् । गतवर्ष मात्रै नगरपालिका कार्यालयले ठूलो बजेट खर्च गरी यहाँसम्म पुग्ने सडक निर्माण गरेको थियो । निर्माण गरिएको सडकको केही ठाउँमा भत्किएको छ भने केही ठाउँमा भासिएको छ । सडक मर्मत गरी सञ्चालन गर्न निकै समय र खर्च लाग्ने नगरपालिकाका कर्मचारीको भनाइ छ ।
मुसेट्टी क्षेत्रमा पहिरोले बाटो भत्किएको छ । मुसेट्टी खोला आसपासका क्षेत्रमा पहिरो गएको छ । केही स्थानमा बाटोमा रुख र बिजुलीका खम्बा ढलेका छन् । तार भूइँमा खसेका छन् । खल्लाका नारदसिंह मडैले वर्षापछि खल्ला, टुँडिखेल र मुसेट्टी बाटोघाटो, विद्युत्, टेलिफोन सबै बन्द भएको बताउनुभयो । “वर्षाको बाढीले केही बाँकी राखेन । अहिले त ब्रह्मदेवसम्म हिँडेर जान पनि समस्या छ”, उहाँले भन्नुभयो,“सबै कुरा अवरुद्ध छन । जनता मारमा छन ।”
भीमदत्त नगरपालिका– ९ का अध्यक्ष रामनाथले बाटो बन्द भएपछि पैदल हिँड्न र बोकेर समान ब्रह्मदेवसम्म पु-याउन बाहेक अन्य विकल्प नभएको बताउनुभयो । “विकट बस्तीमा हिँडेर आउनु र पिठ्यूमा बोक्न बाहेक अरु कुनै विकल्प छैन”, उहाँले भन्नुभयो,“वर्षाले बस्तीमा बेहाल बनादियो ।”वर्षाले भत्किएको बाटो पुनःमर्मत गरी सञ्चालनका लागि कार्य थालिएको अध्यक्ष नाथले बताउनुभयो ।